डोनाल्ड ट्रम्प शासनकाे जग हल्लाउने ‘न्यू योर्कर’ का कार्टून – Kanak Mani Dixit
डोनाल्ड ट्रम्प शासनकाे जग हल्लाउने ‘न्यू योर्कर’ का कार्टून
हिमाल खबरपत्रिका (२६ फाल्गुण -२ चैत, २०७५) बाट
‘न्यू योर्कर’ को प्रस्तुतिमा अर्काे विशेषता भनेको हरेक पत्रिकामा पाइने करीब २५–३० कार्टून हुन् । नाम चलेका कैयन् कार्टूनिष्टहरूबाट सम्पादकले छानीछानी पाठकसामु पेश गरेका कार्टूनले हँसाउने र चिन्तन जगाउने दुवै काम गर्छन् ।
‘न्यू योर्कर’ कार्टून भनेपछि ‘न्यू योर्कर’ पत्रिका जस्तै प्रख्यात ‘जन्र’ मानिन्छ । कार्टूनहरु कुनै पनि लेख सम्बन्धित हुँदैनन्, छरिएर पत्रिकाभरि पाइन्छन् । फेरि, ‘न्यू योर्कर’ का पाठक राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक बहसमा एकैठाउँमा रहने हुनाले कार्टूनिष्टलाई ‘नुआन्स’ बोकेको चित्र कोर्न सजिलो हुने गर्छ ।
यसरी ‘न्यू योर्कर’ का कार्टूनले अमेरिकी सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रका पछिल्लो ट्रेन्ड उजागर गर्छन् । कार्टूनले समेटेका कतिपय ठट्टा या व्यङ्ग्य समसामयिक ‘अमेरिकाना’ संस्कृति, बोलीचाली, लवज वा बहसमा आधारित हुन्छन्, र अन्यत्रकाले बुझ्न, हाँस्न या मनन् गर्न हम्मे पर्न सक्दछ ।
न्यू योर्क शहरको (फराकिलो) बौद्धिक जगतको जीवनशैली र चिन्तनमा आधारित कतिपय यी कार्टूनहरु अमेरिकाकै अन्य प्रान्तकाले समेत ठम्याउनै नसक्ने, ‘रिलेट’ गर्न नसक्ने खालका हुन्छन् । घमण्डी/रवाफी बौद्धिकहरुमाथि व्यङ्ग्य समेटिएको प्रहार पनि ‘न्यू योर्कर’ कार्टूनको विशेषता हो ।
सन् १९८० को दशकमा यो स्तम्भकार न्यू योर्कमा रहँदा ‘न्यू योर्कर’ का एक–एक कार्टूनको मर्म बुझ्न गाह्रो थिएन । त्यही बेला म आफैं न्यू योर्क शहरिया थिएँ ।
अर्थात्, न्यू योर्कर । केही वर्षको अन्तरालपश्चात गत हप्ता न्यू योर्क पुग्दा यहाँको ‘कन्टेम्पोररी’ बुझाइ र भोगाइबाट धेरै टाढिइएछ क्यार, कतिपय कार्टून मैले ठम्याउन सकिनँ । बुझेको र हाँसो जगाएका केही कार्टून व्याख्या सहित प्रस्तुत छन्ः
१. न्यू योर्कको म्यानहाटन टापुमा सेन्ट्रल पार्क छ, जहाँ कुकुरलाई वाक्मा लैजाने एउटा ‘रिचुवल’ नै मानिन्छ । पछाडि गगनचुम्बी ‘स्काईस्क्रेपर’ भवन, नजिकमा रुख/बुट्यान — यति हेरेपछि सेन्ट्रल पार्क भनेर बुझिन्छ । कुकुर डोर्‍याउने भलाद्‌मी पुरुष भन्दैछन्, “यो कुकुरले टोक्दैन, तर आत्मपरक विचारको ठूलो भारी भने यसले बोक्छ ।”
३. न्यू योर्कमा धेरै बासिन्दाले कुकुर भन्दा बिरालो पाल्न रुचाउँछन्, व्यस्त व्यावसायिक जीवनमा स्याहार्न अलि सजिलो हुने हुँदा । र कतिपयको घरायसी जीवन यिनै बिरालोको खुशी वरिपरि घुमिरहँदा बिरालो मात्तिनु स्वाभाविकै हो । यो कार्टूनमा तखताभरी बिरालोले खाने क्यान्ड फूडतर्फ हेर्दै गरेकी मालिक्नीलाई बिरालोले चुनौती दिंदै भन्दछ, “(के पो देउली) मलाई चकित तुल्याइदेऊ !”
४. लामो दूरीमा खुम्चिएर हवाई उडान गर्ने यात्रुलाई पछाडिपट्टिको यात्रुको खुट्टाले सीटमा धक्का दिने गर्छ — आफ्नो निजी ‘स्पेस’ बारे सतर्क पश्चिमाहरूलाई यो एकदमै घोच्ने कुरो हो । अगाडि बस्ने प्यासेन्जरले पछाडिकी महिलालाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, “कन्याइदिनु त खुट्टाले, अलिकति माथि, देब्रेतिर… !”